Garooonka uu ugu jecel yahay, xaalada adag ay ku sugan tahay Real Madrid iyo dhowr arimood uu ka hadlay Mesut Ozil – Gool FM
(Arsenal) 25 Okt 2018. Laacibka reer Germany iyo kooxda Arsenal ee Mesut Ozil ayaa u doortay garoonka Santiago Bernabéu kan uu ugu jecel yahay, wuxuuna hadalkiisan imaanayaa kadib markii ay jamaahiirtiisa baraha bulshada uu kaga jawaab celiyay su’aalo badan ay la wadaageen.
Sidoo kale Mesut Ozil ayaa waxaa wax laga weydiiyay fikirkiisa kaga aadan xaalada adag ay haatan ku sugan tahay kooxda Real Madrid, kahor maalmo yar kulanka El Clasico ay kooxda Barcelona ku booqan doonaan garoonka Cump Nou.
Laakiin Laacibka reer Germany iyo kooxda Arsenal ee Mesut Ozil ayaa wuxuu si kalsooni ay ku dheehan tahay ku xaqiijiyay in Real Madrid ay goordhow ay kusoo laaban doonto wadada saxda ah, “Real Madrid goor dhow dib ayay u soo laaban doontaa”.
Ozil oo mudo dhan afar sano ah kusoo qaatay kooxda Real Madrid ayaa xaqiijisay in ciyaaryahanka ugu fiican dhanka gudashada shaqadiisa uu yahay Cristiano Ronaldo, isagoo sidoo kale shaaca ka qaaday in ciyaaryahanka ugu fiicanaa ee uu wajahday intii uu xirfadiisa kubada cagta ku gudi jiray uu ahaa xidiga kooxda Barcelona ee Lionel Messi.
Intaas kadib Mesut Ozil ayaa ka jawaabay su’aal ku aadan inuu sii wadi doono taageerida xulka qaranka Germany, inkastoo uu shaaca ka qaaday inuu ka dhaqaaqay bishii July ee lasoo dhaafay wuxuuna yiri:
“Waxaan taageersanaa xulka qaranka Germany tan iyo caruurnimadeyda, wali waxaan ku leeyahay saaxiibo badan ee halkaas ka ciyaara, Dabcan weli waan taageersanahay”.
PSG oo dharbaaxo xoogan la damacsan Real Madrid